ဆံပငျထူအောငျ ပွုလုပျနိုငျမညျ့ နညျးလမျးမြား
HomeKnowledgeဆံပငျထူအောငျ ပွုလုပျနိုငျမညျ့ နညျးလမျးမြား
H September 05, 2020
ဆံပငျပါးခွငျးကို အမြိုးသမီးသမီး အမြားစုက စိတျညဈတတျပါတယျ။ ဆံပငျပါးတဲ့ အတှကျ ဆံပငျပုံစံရှေးဖို့ ခကျခဲပါတယျ။
ပထမဆုံးအခကျြ အနနေဲ့ ဆံပငျပါးရတာကတော့ မိဘတှရေဲ့ မြိုးရိုးဗီဇကွောငျ့ပါတဲ့။ ဆံပငျထူခွငျးကလညျး မိဘမြိုးရိုးဗီဇနဲ့ဆိုငျပါတယျ။ အာဖရိကနျ - အမရေိကနျလူမြိုးတှကေ ဆံပငျအထူဆုံးပါပဲ။ ဥရောပတိုကျသားတှကေ ဆံပငျအပါးဆုံးပါ။ တခွားအကွောငျးရငျးကတော့ ပတျဝနျးကငျြ၊ ညံ့ဖငျြးတဲ့ ဆံပငျထိနျးသိမျးရေးပစ်စညျးမြား၊ အပူခြိနျ၊ ဆံပငျကို ရနှေေးနဲ့ ခေါငျးလြှျောခွငျး၊ ဆံပငျကို မီးပူနဲ့ဖွောငျ့ခွငျးတို့ကွောငျ့ ဖွဈပါတယျ။
1. ဆံပငျကို လမှေုတျစကျနှငျ့ အလှနျမှုတျခွငျး
2. ဆံပငျကို အလှနျ တငျးကပျြစှာစီးခွငျး
3. ဆံပငျပုံသှငျးသညျ့ ပစ်စညျးမြားကို အသုံးလှနျခွငျး
4. ခေါငျးလြှျောရညျမြားကို အသုံးလှနျခွငျး
ခေါငျးကို နညျးလမျးမှနျစှာ လြှျောပါ။
ဆံပငျထူဖို့ဆိုရငျ ခေါငျးကို ခဏခဏ မလြှျောသငျ့ပါဘူး။ တဈပတျကို သုံးကွိမျထကျ ပိုပွီး မလြှျောသငျ့ပါဘူး။ အဲဒီအခါ ခေါငျးဦးရလေညျး သကျသာရာ ရပါတယျ။ ခေါငျးလြှျောပွီးတဲ့အခါ သှေးလညျပတျမှု ကောငျးစဖေို့အတှကျ ရအေေးနဲ့ ပွနျဆေးခြ ပေးရပါမယျ။
ဆံပငျထူခငျြရငျတော့ စိုးရိမျသောကတှကေို လြှော့လိုကျပါတော့။ စိတျဖိစီးမှု ကငျးဝေးခွငျးက ဆံပငျထူဖို့အတှကျတငျ မဟုတျပါဘူး။ သငျ့ဘဝရဲ့ တခွားကဏ်ဍတှေ အတှကျပါ အကြိုးရှိစပေါတယျ။
ကနျြးမာရေးနဲ့ ညီညှတျတဲ့ အစားအစာတှကေို စားပါ။
ကနျြးမာရေးနဲ့ ညီညှတျတဲ့ အစားအစာတှကေရတဲ့ ဗီတာမငျဓာတျတှကေ သငျ့ဆံပငျကို အကြိုးပွုပါတယျ။ ပရိုတိနျးဓာတျ ပွညျ့ဝတဲ့ အစားအစာမြား (ပဲနီကလေး၊ တိုဖူး၊ မွပေဲ)၊ ကနျြးမာရေးနဲ့ ညီညှတျတဲ့အဆီမြား (ထောပတျသီး၊ အစအေ့ဆံမြား၊ အုနျးဆီ၊ သံလှငျင်ျဆ)၊ သတ်ထုဓာတျ ပွညျ့ဝတဲ့ အစားအစာမြား၊ အငျတီအောကျစီးဒငျ့နဲ့ ဗီတာမငျဘီ အုပျစုတှကေ မရှိမဖွဈ လိုအပျပါတယျ။
ဆံပငျပုံစံပွောငျးတာ၊ ဆံပငျအရောငျ ဆိုးတာတှကေ ဆံပငျထူတယျ လို့ ထငျရစပေါတယျ။ သငျ့ဆံပငျကို လြှပျစဈနဲ့ အခွောကျခံ ပုံသှငျးရငျ ဘီးဝိုငျးကိုသုံးဖို့ မမပေ့ါနဲ့နျော။ ဆံပငျပညာရှငျတှကေပဲ ဆံပငျကိုထူအောငျ လုပျပေးနိုငျတယျလို့ လူအမြားစုက လကျခံထားကွပါတယျ။ သငျလညျးပဲ ခဏခဏ လကေ့ငျြ့ရငျတော့ ဆံပငျထူအောငျ ကိုယျတိုငျပွုလုပျလာနိုငျမှာပါ။ ဒါ့အပွငျ ကြှမျးကငျြတဲ့ ဆံပငျပညာရှငျနဲ့ တိုငျပငျပွီး ဆံပငျထူအောငျ လုပျနိုငျမယျ့ ဆံပငျပုံစံကို ရှေးခယျြနိုငျပါသေးတယျ။
ဒီနညျးလမျးလေးတှေ ကတော့ လှယျကူရိုးရှငျးပါတယျ။ ကနျြးမာရေးနဲ့လညျး ညီညှတျပါတယျ။ ဒီနညျးလမျးလေးတှကေို လုပျကွညျ့ခွငျးဖွငျ့ သငျ့ရဲ့ပငျကိုအလှကို ပျေါလှငျစမှောပါ။ အမြိုးသမီးတိုငျးမှာ အလှကိုယျစီ ရှိတာဖွဈလို့ ဆံပငျပါးတာက စိတျညဈစရာ မဟုတျပါဘူးနျော။
ဆံပင်ထူအောင် ပြုလုပ်နိုင်မည့် နည်းလမ်းများ
ဆံပင်ပါးခြင်းကို အမျိုးသမီးသမီး အများစုက စိတ်ညစ်တတ်ပါတယ်။ ဆံပင်ပါးတဲ့ အတွက် ဆံပင်ပုံစံရွေးဖို့ ခက်ခဲပါတယ်။
ပထမဆုံးအချက် အနေနဲ့ ဆံပင်ပါးရတာကတော့ မိဘတွေရဲ့ မျိုးရိုးဗီဇကြောင့်ပါတဲ့။ ဆံပင်ထူခြင်းကလည်း မိဘမျိုးရိုးဗီဇနဲ့ဆိုင်ပါတယ်။ အာဖရိကန် - အမေရိကန်လူမျိုးတွေက ဆံပင်အထူဆုံးပါပဲ။ ဥရောပတိုက်သားတွေက ဆံပင်အပါးဆုံးပါ။ တခြားအကြောင်းရင်းကတော့ ပတ်ဝန်းကျင်၊ ညံ့ဖျင်းတဲ့ ဆံပင်ထိန်းသိမ်းရေးပစ္စည်းများ၊ အပူချိန်၊ ဆံပင်ကို ရေနွေးနဲ့ ခေါင်းလျှော်ခြင်း၊ ဆံပင်ကို မီးပူနဲ့ဖြောင့်ခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
1. ဆံပင်ကို လေမှုတ်စက်နှင့် အလွန်မှုတ်ခြင်း
2. ဆံပင်ကို အလွန် တင်းကျပ်စွာစီးခြင်း
3. ဆံပင်ပုံသွင်းသည့် ပစ္စည်းများကို အသုံးလွန်ခြင်း
4. ခေါင်းလျှော်ရည်များကို အသုံးလွန်ခြင်း
ခေါင်းကို နည်းလမ်းမှန်စွာ လျှော်ပါ။
ဆံပင်ထူဖို့ဆိုရင် ခေါင်းကို ခဏခဏ မလျှော်သင့်ပါဘူး။ တစ်ပတ်ကို သုံးကြိမ်ထက် ပိုပြီး မလျှော်သင့်ပါဘူး။ အဲဒီအခါ ခေါင်းဦးရေလည်း သက်သာရာ ရပါတယ်။ ခေါင်းလျှော်ပြီးတဲ့အခါ သွေးလည်ပတ်မှု ကောင်းစေဖို့အတွက် ရေအေးနဲ့ ပြန်ဆေးချ ပေးရပါမယ်။
ဆံပင်ထူချင်ရင်တော့ စိုးရိမ်သောကတွေကို လျှော့လိုက်ပါတော့။ စိတ်ဖိစီးမှု ကင်းဝေးခြင်းက ဆံပင်ထူဖို့အတွက်တင် မဟုတ်ပါဘူး။ သင့်ဘဝရဲ့ တခြားကဏ္ဍတွေ အတွက်ပါ အကျိုးရှိစေပါတယ်။
ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ အစားအစာတွေကို စားပါ။
ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ အစားအစာတွေကရတဲ့ ဗီတာမင်ဓာတ်တွေက သင့်ဆံပင်ကို အကျိုးပြုပါတယ်။ ပရိုတိန်းဓာတ် ပြည့်ဝတဲ့ အစားအစာများ (ပဲနီကလေး၊ တိုဖူး၊ မြေပဲ)၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့အဆီများ (ထောပတ်သီး၊ အစေ့အဆံများ၊ အုန်းဆီ၊ သံလွင်င်္ဆ)၊ သတ္ထုဓာတ် ပြည့်ဝတဲ့ အစားအစာများ၊ အင်တီအောက်စီးဒင့်နဲ့ ဗီတာမင်ဘီ အုပ်စုတွေက မရှိမဖြစ် လိုအပ်ပါတယ်။
ဆံပင်ပုံစံပြောင်းတာ၊ ဆံပင်အရောင် ဆိုးတာတွေက ဆံပင်ထူတယ် လို့ ထင်ရစေပါတယ်။ သင့်ဆံပင်ကို လျှပ်စစ်နဲ့ အခြောက်ခံ ပုံသွင်းရင် ဘီးဝိုင်းကိုသုံးဖို့ မမေ့ပါနဲ့နော်။ ဆံပင်ပညာရှင်တွေကပဲ ဆံပင်ကိုထူအောင် လုပ်ပေးနိုင်တယ်လို့ လူအများစုက လက်ခံထားကြပါတယ်။ သင်လည်းပဲ ခဏခဏ လေ့ကျင့်ရင်တော့ ဆံပင်ထူအောင် ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်လာနိုင်မှာပါ။ ဒါ့အပြင် ကျွမ်းကျင်တဲ့ ဆံပင်ပညာရှင်နဲ့ တိုင်ပင်ပြီး ဆံပင်ထူအောင် လုပ်နိုင်မယ့် ဆံပင်ပုံစံကို ရွေးချယ်နိုင်ပါသေးတယ်။
ဒီနည်းလမ်းလေးတွေ ကတော့ လွယ်ကူရိုးရှင်းပါတယ်။ ကျန်းမာရေးနဲ့လည်း ညီညွတ်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းလေးတွေကို လုပ်ကြည့်ခြင်းဖြင့် သင့်ရဲ့ပင်ကိုအလှကို ပေါ်လွင်စေမှာပါ။ အမျိုးသမီးတိုင်းမှာ အလှကိုယ်စီ ရှိတာဖြစ်လို့ ဆံပင်ပါးတာက စိတ်ညစ်စရာ မဟုတ်ပါဘူးနော်။